Nin Khabiir ah oo Diyaaradaha Drones-ka u farsameyn jiray Kooxda Xamaas oo si Qorsheesan loo dilay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Nin Khabiir ah oo Diyaaradaha Drones-ka u farsameyn jiray Kooxda Xamaas oo si Qorsheesan loo dilay!!
Nin Khabiir ah oo Diyaaradaha Drones-ka u farsameyn jiray Kooxda Xamaas oo si Qorsheesan loo dilay!!
Ururka Islaamiga Xamaas ee u dagaalamaya Xureynta Dhulka xooga lagu heesto ee Falastiin ayaa xaqiijiyay in la dilay Khabiir u qaabilsanaa sameynta iyo farsamada Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Drones-ka.
Maxamed al-Zawari oo 49-sano jir khabiir ku ahaa farsameynta Diyaaradaha aan Duuliyaha laheyn ayaa khamiistii lasoo dhaafay waxaa lagu dilay magaalo kutaala dalka Tunuusiya, waxaana la toogtay xili uu gurigiisa kasoo baxay.
Ururka Xamaas ayaa dilka Khabiirkan katirsanaa kooxdooda loo geestay ku eedeesay in ay ka dambeesay Maamulka Israa’il, waxa ayna Kooxdu ku hanjabtay in ay u aar gudi doonaan Maxamed al-Zawari.
Dowlada Tunuusiya ayaa sheegtay in dilka Maxamed al-Zawari loo xiray 8-qof oo u dhashay dalka Tunuusiya kuwaa oo la tuhmayo in ay ku lug lahaayeen dilkaasi, waxaa sidoo kale dadka falkan dilka ah loo xiray ku jira Wariye u dhashay Tunuusiya kaa oo lagu xiray dalka Hungry.
Kooxda Xamaas ayaa sheegtay Maxamed al-Zawari uu kooxdooda katirsanaa in mudo ah uuna kasoo qeyb qaatay dagaalo ay guulo ku gaareen ay la galeyn Israa’il, waxa ayna tilmaameen in dilkiisa aan meesha looga hari doonin ayna ka aargudan doonaan Israa’il.
Previous PostDaawo Sawirro: Nin u dhashay Sacuudiga oo ku dhaqaaqay talaabo yaab leh oo sababtay in xabsiga la dhigo!! Next PostHogaamiyaha Aan Rabno!!